पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलमा विद्युत सेवा अवरुद्ध
मूख्य क्षति १३२ र ६६ लाइन र सवस्टेशनमा
२०७४ श्रावण २९ आइतबार १८:३१:००
काठमडौं । पूर्वी तथा मध्य नेपालमा भइरहेको अविरल बर्षाका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशारण लाइन, सवस्टेशन तथा वितरण प्रणाली लगायतका संरचनाहरुमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले विराटनगर लगायत पूर्वाञ्चलका जिल्लामा विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै मध्यमाञ्चलका धेरैजसो जिल्लामा पनि आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ्र । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति अबरुद्धबाट भएको समस्याप्रति माफी माग्दै चाँडै सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न लागिपरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले यथासिघ्र समस्याको समाधान गरी विधुत आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मुलकका विभिन्न ठाँउमा आएको बाढी तथा पहिरोले अहिले मूख्यगरी १३२ र ६६ केभी लाइन तथा सवस्टेशनमा क्षति गरेको छ । जसकारण सम्बन्धीत क्षेत्रमा विद्युत वितरणमा अबरोध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको अनुसार अहिले दमक–गोधक खण्डको १३२ केभीको लाइन अन्तरगत चुलाचुलीमा रहेको टावर न. १७ बाढीको कारण ढलेको छ ।
त्यस्तै हेटाैंडा सवस्टेशन अन्तर्गतको हेटौंडा सिमेन्ट नजिक रहेको ६६ केभी टावर पनि ढलेको छ । जसका कारण ६६ केभी औद्योगिक फिडर सर्किट नं. १, २ बन्द गरिएकको छ । दुहवी सवस्टेशन, दमक सवस्टेशन, अनारमनी सवस्टेशन जलमग्न भएको छ । त्यहाँ शुक्रबार बिहानबाट नै पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो ।
चपुर–पथलैया १३२ केभी सर्किट नं.२ पनि शुक्रबार रातिदेखि चल्न नसेको प्रधिकरणले जानकारी दिएको छ । ढल्केबर–चपुर १३२ केभी सर्किट नं.१ शुत्रबार दिउसोदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
बालाजु–त्रिशुली ६६ केभी सर्किट नं.१ र २ शुक्रबार रातिदेखि चल्न सकेको छैन । नयाँ संरचनामा रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभीको भलुहीमा टावर नं.१७÷० र १६÷० मा समेत बाढीले बेस बगाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।